Assistive +: ampio fanampiana manampy amin'ny fampiasa bebe kokoa (Cydia) | Vaovao IPhone
Ny andro lasa izay dia nilaza taminay izahay ny fomba ahafahanao maka pikantsary amin'ny iPad amin'ny alàlan'ny fitaovana fidirana amin'ny iOS 7: Touchive Touch, raha tokony hampiasa ny bokotra Home sy Power. Ny assistive Touch dia fitaovana azo idirana ao amin'ny iOS, izay ahafahantsika manatanteraka asa sasany amin'ny bokotra tokana ahafahantsika mihetsika manodidina ny efijery. Androany, handinika tweak vaovao isika, Mpanampy +, izay hitako tao amin'ny Cydia ahafahantsika manatanteraka asa bebe kokoa noho ilay "assistive Touch Original". Raha tsy misy resaka intsony, andao hojerentsika ny mampiavaka ny Mpanampy +.
Fitaovana maro hafa ho an'ny Touchive Touch miaraka amin'ny tweak Assistive +
Ny assistive + dia tweak, izay, araka ny efa nolazaiko, dia mamela antsika hametraka bokotra vaovao mitovy amin'ny an'ny Apple's accessibility tool (izay noresahintsika teo aloha) miaraka amina asa maro hafa. Azo alaina amin'ny repo ofisialy BigBoss amin'ny vidiny Dolara 1.49. Raha te-hitsapa ny fiasan'ity tweak ity ianao, Azonao atao ny misintona kinova maimaimpoana amin'ny repo iray antsoina hoe: assistive.
Raha vantany vao alaina ny assistive + dia hiseho eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery ny kisary misy baolina fotsy. Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manamboatra ny bokotra avy amin'ny Fikirakirana ny fitaovantsika:
Ankavia ambony / ankavanana ambony / ambany ankavia / ambany ankavanana: Rehefa manindry mandritra ny fotoana fohy eo amin'ny baolina fotsy napetrak'i assistive + isika, dia miditra amin'ny takelaka efatra izay manao asa samihafa. Ao anatin'ireo fitaovana "Ambony ankavia", "Ambony ankavanana", "Ambany ankavia" ary "Ambany ankavanan'ny" fitaovana ananantsika ny fiasa rehetra azon'ireo tontonana efatra atao: famerenana, Bluetooth, Wi-Fi, hidy, pikantsary ...
Bika Aman 'endrika: Hiditra amin'ity faritra ity izahay hanovana ny bokotra assistive +. Ao anatin'ity fitaovana ity dia manana ny haben'ny bokotra, ny radius, ny mangarahara ary koa ny loko isika.
Tsindrio ny sisiny: Azontsika atao ihany koa ny mamindra ny bokotra manerana ny efijery amin'ny fisintomana ny kisary ary apetrakao amin'ny toerana rehetra eo amin'ny efijery. Raha manamarina an'ity safidy ity isika, dia azo apetraka eo amin'ny sisiny sy ny zoro ihany ny bokotra.
Ny assistive + dia manana fampiasana roa lehibe:
Raha tsindrio ny bokotra indray mandeha, dia hiditra amin'ny Springboard isika, raha manindry roa isika, multitasking ary raha manindry intelo misesy izahay dia hanakana ny terminal.
Ny tena anjara asany: Raha manindry kelikely isika, dia aseho ny hetsika 4 fa rehefa ahetsiketsika ny rantsan-tanantsika amin'izy ireo (tsy misy famotsorana) dia hanao ilay hetsika nolazainay fa manao assistive + amin'ny fikirana izy ireo.
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny fakana pikantsary tsy misy ny bokotra Home and Power
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Assistive +: ampio fanampiana manampy amin'ny asa bebe kokoa (Cydia)
BattSaver dia mampanantena ny hampiakatra avo roa heny ny ainao bateria (Cydia)